Yesaia 29 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Due Ariel! (1-16)
Ɔmpɛ anofafa som (13)
Wɔn a wɔn aso asiw bɛte asɛm; anifuraefo behu ade (17-24)
29 “Due Ariel,* Ariel, kurow a Dawid tenaa mu!+ Munni no afe biara;Munni mo afahyɛ nyinaa nhyia.+ 2 Nanso mɛma Ariel ho ayeraw no,+Na wobesu atwa adwo,+Na ɔbɛyɛ m’ani so te sɛ Onyankopɔn afɔremuka.+ 3 Metwa wo ho nyinaa* ahyia,Na mede nnua a ano yɛ mfeamfeaa bɛka wo ahyemNa masi akoban* afa wo ho nyinaa.+ 4 Wobɛhwe ase;Wobɛkasa afi fam hɔ,Na mfuturu nti, obiara rente nea wobɛka. Wo nne befi fam aba+Te sɛ ɔdebisafo nne,Na wo kasa befi mfuturu mu aba te sɛ anomaa su. 5 W’atamfo dodow* bɛyɛ sɛ mfuturu,+Na atirimɔdenfo dɔm ayɛ sɛ ntɛtɛwa a ɛrehuw kɔ.+ Na ɛbɛba mpofirim,prɛko pɛ.+ 6 Asafo Yehowa bɛba abɛhwɛ wo;Ɔde aprannaa ne asaasewosow ne mmobom,Ɔde ahum ne mframa gyampantrudu ne ogyaframa.”+ 7 Afei aman a wɔne Ariel reko nyinaa mu nnipadɔm,+Kyerɛ sɛ, wɔn a wɔne no reko nyinaa,Akoban a wɔasi atwa ne ho ahyia,Ne wɔn a wɔama ne ho ayeraw no nyinaa,Ɛbɛyɛ sɛ dae, anadwo anisoadehu bi. 8 Ɛbɛyɛ sɛ obi a ɔkɔm de no a waso dae sɛ ɔredidi,Nanso ɔbɛsɔre no na ɔkɔm da so ara de no.*Anaa obi a osukɔm de no a waso dae sɛ ɔrenom nsu,Nanso ɔbɛsɔre no na wabrɛ, na na osukɔm da so ara de no.* Saa ara na ɛbɛto amanaman mu nnipadɔmA wɔne Sion Bepɔw bɛko no nyinaa.+ 9 Montɛɛ mo anom na mo ho nnwiriw mo;+Monka mo ani mfomfam so na mo ani mfura.+ Wɔabobow, nanso ɛnyɛ nsã* ntia;Wɔkɔ afã-afã, nanso ɛnyɛ nsã a ɛbow ntia. 10 Yehowa ahwie honhom a ɛma wɔda hatee agu mo so;*+Wakata mo ani, mo a moyɛ adiyifo no;+Na wakata mo ti, mo a moyɛ adehufo no.+ 11 Anisoadehu biara bɛyɛ mo sɛ nhoma a wɔatare ano mu nsɛm.+ Sɛ wɔde ma obi a onim akenkan, na wɔka kyerɛ no sɛ: “Yɛpa wo kyɛw kenkan eyi den a,” ɔbɛka sɛ: “Merentumi, efisɛ wɔatare ano.” 12 Na sɛ wɔde nhoma no ma obi a onnim akenkan, na wɔka kyerɛ no sɛ: “Yɛpa wo kyɛw kenkan eyi a,” ɔbɛka sɛ: “Minnim akenkan koraa.” 13 Yehowa ka sɛ: “Ɔman yi de wɔn ano na ɛbɛn me,Na wɔde wɔn ano na edi me ni,+Na wɔn koma de, atwe afi me ho kɔ akyirikyiri;Wogyina nnipa ahyɛde a wɔakyerɛ wɔn so na esuro me.+ 14 Enti, me ne ɔman yi bedi anwonwasɛm bio,+Ɛbɛyɛ wɔn nwonwa asan ayɛ wɔn nwonwa;Na wɔn anyansafo nyansa bɛsɛe,Na wɔn mmadwemma ntease betu ayera.”+ 15 Wɔn a wɔde wɔn nhyehyɛe* sie Yehowa fee no nnue.+ Wɔyɛ wɔn nnwuma wɔ sum mu,Na wɔka sɛ: “Hena na ohu yɛn? Hena na onim nea yɛreyɛ?”+ 16 Mo a musi nneɛma ti ase!* Ɛsɛ sɛ wobu ɔnwemfo ne dɔte nyinaa pɛ anaa?+ Ɛsɛ sɛ ade a wɔayɛ ka fa ne yɛfo ho sɛ: “Ɛnyɛ ɔno na ɔyɛɛ me”?+ Na anwenne betumi aka ne nwemfo ho asɛm sɛ: “Onnim hwee” anaa?+ 17 Aka kakraa bi, na Lebanon adan turo,+Na wobebu turo no sɛ kwae.+ 18 Saa da no, wɔn a wɔn aso asiw bɛte nhoma no mu nsɛm,Na anifuraefo befi kusuuyɛ ne sum mu ahu ade.+ 19 Ahobrɛasefo bedi ahurusi pii wɔ Yehowa mu,Na nnipa mu ahiafo begye wɔn ani wɔ Israel Kronkronni no mu.+ 20 Efisɛ otirimɔdenfo befi hɔ,Nea ɔhoahoa ne ho awiei bɛba,Na wɔbɛsɛe wɔn a wɔrepɛ bɔne adi nyinaa,+ 21 Wɔn a wɔnam nkontompo so ma afoforo di fɔ,Wɔn a wosum nea ɔhwɛ ma atɛntrenee yɛ adwuma* wɔ kurow pon ano no afiri,+Na wɔnam akyinnyehunu so ma wobu ɔtreneeni atɛnkyea.+ 22 Enti nea Yehowa a ogyee Abraham+ no aka akyerɛ Yakob fi ni: “Yakob ani renwu bio,Na n’anim nso renyɛ bosaa* bio.+ 23 Sɛ ohu sɛ ne mmaA wɔyɛ me nsa ano adwuma no wɔ ne mfinimfini a,+Wɔbɛtew me din ho,Yiw, wɔbɛtew Yakob Kronkronni no din ho,Na wobesuro Israel Nyankopɔn.+ 24 Wɔn a wɔn adwene akyea no benya ntease,Na wɔn a wonwiinwii no betie akwankyerɛ.”
^ Ebetumi akyerɛ “Onyankopɔn Afɔremuka.” Ɛbɛyɛ sɛ egyina hɔ ma Yerusalem.
^ Anaa “Mɛbɔ wo ho nsra.”
^ Nt., “Nnipakuw a wonnim wɔn.”
^ Anaa “ɔkɔm da so ara de ne kra.”
^ Anaa “ne kra mu nsu atwe.”
^ Anaa “Yehowa ahwie nnahɔɔ honhom agu mo so.”
^ Anaa “Mo a mo adwene akyea!”
^ Nt., “nea onya nkurɔfo kasakyerɛ.”
^ Kyerɛ sɛ, nea fɛre ne huammɔdi de ba.